AASraw nmn & nr powder Mugadziri hplc≥98% | AASraw
MUTSVENE unopa hushoma-hushoma hwekugadzira kugona kuti ikurumidze kupindura kune chinodiwa chezvidiki zvidiki uye zviyero-zvekusimudzira zvido zvekusimudzira (1 kusvika 50 kg).
Zvivakwa zveAASraw zvakakodzerwa nekugadzirwa kwemakemikari epakati uye anoshanda emishonga zvigadzirwa (APIs) mumakiriniki ekuedzwa,
pamwe nekushambadzirwa madiki-vhoriyamu APIs. Miti midiki-midiki inoshanda zvinoenderana nemitemo yeGMP.
Maitiro eAASraw modular ekugadzirisa michina kune zvimwe zvinodiwa zvinogonesa zvivakwa izvi kubata zvidiki- kusvika pakati-zvidiki kugadzirwa.
Nzira uye teknoloji kutengesa pamwe nekuwedzera-up kudyara mbeu dzedu dzakawanda dzakasiyana-siyana.
Sechikamu cheAASraw yakazara vhoriyamu renji yekugadzira uye yekukwirisa-kumusoro masevhisi, akasiyana-siyana makuru-makuru masimba anopihwa ekugadzira anosvika anoverengeka zana matani pachigadzirwa uye gore, semuenzaniso 100 m3 simba.
Zvibereko zvakatsaurirwa zve:
◆ Hydrogenation nezvimwe zvinokonzerwa nepamusoro-kushandiswa (kusvika ku-80 bar)
◆ Low-tembiricha kemisitiri (pasi -80 ° C)
◆ Kuchechera (1 tani pamatch)
◆ Inoshandiswa nemishonga inoshandiswa (GMP)
◆ Zvishandiso zvepamusoro (kusvika kune zvidzidzo zve 70)
◆ Yakakwirira-tembiricha kemisitiri (inosvika 250 ° C)
◆ Medium-pressure flash chromatography inokwanisa kusvika ku 20 kilogram yakakura yekuparadzanisa zvinhu.
Kusurukirwa & Kuomesa
Kugadzikana kwemidziyo midiki-midiki, inogadzira kilo uye yakakura kugadzira.
◆ Kufuridzira mafikisi (mafoni uye kugadzirisa, makamuri akachena)
◆ Centrifuges (makamuri akachena)
Rooms 3 Makamuri akachena (Class100'000)
◆ 2 Makamuri ekutsvina akazvitsaurira
◆ Kudzika midziyo (GMP)
◆ Bvisa jira rakaoma
◆ Dhinda rekasefa maviri (4.5m3, simbi isina ngura)